हतास मुख्यमन्त्री ! « Pahilo News
हतास मुख्यमन्त्री !
प्रकाशित मिति :4May, 2018 7:58 am
प्रदेश सरकारले पर्याप्त बजेट र जनशक्ति नपाउँदा संघीय सरकारप्रति गुनासो गर्न थालेका छन् । संघीय सरकारले प्रदेशमातहतका कार्यालयहरूलाई ४ महिनासम्म पनि पर्याप्त कर्मचारी पठाउन सकेको छैन । साथै, नयाँ कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारलाई बजेट पनि करिब १ अर्ब मात्रै पठाएको छ ।जनताका सपना पूरा गर्ने वाचासहित मुख्यमन्त्रीहरू निर्वाचित भए, प्रदेश सरकार गठन भएको छ । तर, स्थापनाको चार महिनामै प्रदेश सरकारबाट थाक्ने स्थितिमा पुगिसकेका छन् । प्रदेश सरकारहरू बजेट कम भएको, कर्मचारी अभाव भएको र संघीय सरकारको असहयोगबाट पीडित भएको बताउन थालेका छन् ।
प्रदेश सरकारले सरकार गठनको ४ महिना पुग्दासम्म पर्याप्त कर्मचारी पाएका छैनन् । एकातिर कर्मचारी प्रदेशमा जान नमान्ने र संघीय सरकारले पनि पठाउन नसक्ने अवस्थाले व्यवस्थापकीय र प्रशासनिक काममा असर परेको मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो छ । नयाँ पत्रिकालाई प्रतिक्रिया दिँदै मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशमा आएका कर्मचारी जुनियर र कमजोर क्षमता भएका मात्रै भएको दाबी गरेका छन् । ‘एकातिर कर्मचारी कम आएका छन् र आएकामध्ये पनि जुनियर र कमजोर क्षमता भएका छन्,’ कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
कर्मचारी अभावले कार्यक्रम अनुगमन तथा कार्यान्वयन जटिल भएको प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबहादुर राउतको गुनासो छ । उनले प्रदेशले नै करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था निम्तिएको बताए । यस्तो समस्या अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पनि जानकारी गराए । तर, वैशाख महिनाभित्र प्रदेशमा कर्मचारी पुर्‍याइसक्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको दाबी छ । मन्त्री पण्डितका अनुसार कर्मचारीलाई स्थानीय तह र प्रदेशमध्ये एक विकल्प रोज्न लगाएको र उनीहरूकै रोजाइका आधारमा वैशाखभित्र सम्बन्धित कार्यक्षेत्रमा पठाइसक्ने बताए ।
स्रोत पनि छैन
प्रदेशलाई संघीय सरकारले असार मसान्तका लागि करिब १ अर्ब रुपैयाँ बजेट पठाएको छ । तर, उक्त रकम नयाँ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अपुग हुने प्रदेश सरकारहरूको भनाइ छ । उनीहरू वित्तीय अभावमा सरकार चलाउनु परिरहेको गुनासो गर्छन् । प्रदेश मातहत रहने प्राकृतिक स्रोत र वित्तीय स्रोतको बाँडफाँड हुन सकेको छैन । ती स्रोत बाँडफाँडका लागि आवश्यक प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँट तथा वित्तीय आयोग अहिलेसम्म गठन हुन सकेको छैन ।
अधिकार पाएका छैनौँ
संवैधानिक अधिकारहरू अझै बाँडफाँड हुन सकेको छैन । हामीले प्रदेशले पाउने संवैधानिक अधिकार पनि संघबाट कुण्ठित गरिएको महसुस गरिरहेका छौँ । खारेज हुनुपर्ने जिल्लाका कार्यालयहरू पुरानै अवस्थामा छन् । स्थानीय तहले पाउनुपर्ने अधिकार अझै पाएको छैन । क्षेत्रीय कार्यालयहरू प्रदेशअन्तर्गत ल्याइएको छैन । प्रस्ट भन्दा प्रदेशलाई अहिलेसम्म केही पनि अधिकार आएको छैन । नयाँ आर्थिक वर्षबाट प्रदेशले गति लेला कि ।
अहिलेसम्म अस्थायी दरबन्दीका ६० प्रतिशत कर्मचारी मात्र आइपुगेका छन् । बाँकी ४० प्रतिशत अझै खटाइएको छैन । आएका कर्मचारीमा पनि न उत्साह छ, न जिम्मेवारीबोध नै । काम गर्नेभन्दा पनि ‘गर्दिने’ प्रवृत्ति देखिन्छ ।
प्रदेशभित्रका जिल्लाका सिडियो वरिष्ठतम् सहसचिव छन् । प्रदेशको मन्त्रालयमा सचिव भएर आएकाहरू जुनियर छन् । सिडियोहरू जुनियर सहसचिव अर्थात् प्रदेश सचिवको मातहतमा बसेर काम गर्न मानिरहेका छैनन् । अहिले संक्रमणकाल भएकाले यस्तो भएको हो भन्ने बुझाइ छ ।
-मुख्यमन्त्री आफैँले समस्या देखाउँदै हिँडेर हुँदैन । महादेव आफैँ लम्पसार परे के हुन्छ ? कर्मचारी प्रशासनको विषयमा मुख्यमन्त्रीले संघसँग समन्वय गर्नुपर्छ । समाधान खोज्नुपर्छ । नयाँपत्रिकामा खबर छ ।